Waxaa jira xasuuq iyo barakicin 5tii bari ee lasoo dhaafay kasocday magaalada mooyale ooy waday qoomiyada Oromada. Waxaa baraha bulshada lasoo dhigay muqaalo argagax galinayo dadka bini aadamka ah oo ah Somali la gumaaday kadibna lagu gurahayo godweeyn iyadoo Oromadu markaas ku heesaysa iskuna guubaabinaysa sidii loo gumaadi lahaa Somalida.
Xidhiidh aan la sameeynay dad ku nool Mooyale waxay noosheegeen in aan la qiyaasi Karin tirade dhabta ah maadaama weerarku aad u badnaa habeen iyo maalina la ugaadhsanayay dadka Somalida ah. Waxaa loogu soo daatay guryahooda waana la laayay lana bililiqeeystay.
Waxa weerarka wada waa dad hubaysan oo shacab ka Oromada ah ooy weheliyaan militia da Oromada garabna ka helayo maamulka iyo Police ka guud ee Kililka Oromada. Ujeedada kadanbeeysa waxaa weeye sidaan lawada socono waxaa jirtay duulaan iyo weeraro ay Oromadu kawaday dhulka xuduudaha ah ee ay lawadaagto Somalida. Taas ooy ooga jeedaan dhul balaadhsi iyagoo ku gabanayay Liyuu police baa na laayay iyo maamulka Ileey sidaas daraadeed waxay xalalaeeysteen dhiiga Somalida. Xasuuqa Mooyaale waxaa ka horeeyay xasuuqii ay kasameeyeen Nagayle, Balbalayti, Baabili, Jinacsani, Qubi, Lagahida, Mombasa, iyo deegaanada kale Xadka Oromada iyo Somalida udhaw.
Xukuumada Ethiopia ee Abiya Raysalwasaraha kayahay ilaa intuu xilka qabtay weerarka Oromada ay Somalida kuhayso wuu siibadanahayaa wax difaac ah ama garab ah oo shacabka Somalida ee deeganadaas dagan uu haystana ma jiro. Wuxuu ka dhaxlay dhibaatadii militariga Ethiopia iyo Liyuu police ay kuhayeen kan Oromada oo isagu dhul boobnimo ay udheertahay.
Midowga Dhalinyarada Iyo Ardayda Ogadenia waxay ugubaaqahayaan Xukuumada Ethiopia in ay xal dag dag ah oo dhab ah ay ka dhaliyaan dhibaatadda oromadu kawada xadadka. Sidookale raysalwasaraha isbadalada cusub uu sheegay ineey ka go’antahay inuu qaado waxaa qiimeeyn u ah dajinta iyo nabadaynta deeganada qoomiyadiisu dhibaatada kawado. Waxaa lagu qiimeeyn siduu ugu cadaalad falo dadka Somaliyed ee dhiigooda la banaystay.
Midowga Dhalinyarada iyo aradayda Ogadenia waxay ugu baaqahayaan haaydaha xuquuqda aadanaha udooda, doowladaha caalamka, qaramada midoobay iyo deeq bixiyayaasha caalamka in si dagdag ah wax looga qabto xasuuqa dadka Somaliyed Oromadu kuhayso sidookalana lala gaadho gargaar dagdag ah.